ဘဝရဲ့မုန်တိုင်း ~ Myo Chit Myanmar
11:58 PM 17 comments
Storm Of Life by myochitmyanmar
" ဘဝရဲ့မုန်တိုင်း "
Timbaland ၏ Apologize မှ Body Frame ကို အနည်းငယ်အခြေခံထားပါသည်
It's very touching song.
It would be more touched and grip to the heart if u create with video footage which is related with your lycris. Then to submit in Youtube would be awesome that people can watch it.
It would be really nice to see with video. If u could please try....,
nice.. it's almostapop song. can't you make it intoamtv?
If you upload it on youtube, I am ready to link on my blog as well and let everyone else know.
Please really let me know if the vid is available to be put on my site.
နားထောင်ရပြီဗျာ၊ တော်တော်လေး download လုပ်လိုက်ရတယ်။
အရမ်း ရသမြောက်ပါတယ်၊ melody ရော စာသားတွေရော ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ နားထောင်ရတဲ့အတွက် လေဘေးသင့် ဒုက္ခသည် များကိုယ်စား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျနော်က ဒီဒုက္ခများအားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်မဟုတ်လို့ သူတို့ကိုယ်စားပြောခွင့် ရှိ/မရှိမသိပေမဲ့ သူတို့ အတွက်ပြောပေးတာလို့ဘဲ သဘောထားပါဗျာ။
ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခု ကုမ္ပဏီက လေဘေး/ရေဘေးကြောင့်ဒုက္ခအတိရောက်နေကြရတဲ့ သူတွေအားလုံးရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့ donation တစ်ခုလုပ်ဖို့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်၊ အစိုးရနဲ့လဲ မပတ်သက်၊ NGO တွေနဲ့လဲ မပတ်သက်၊ UN နဲ့လဲ မပတ်သက်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ သီးခြားလုပ်မှာပါ။
လုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကြားကို ကိုမျိုးချစ်ရဲ့သီချင်း "ဘဝရဲ့မုန်တိုင်း" ကို ဘေးဒုက္ခ ခံစားနေကြရသူများ နားထောင်လို့ရအောင် ကျနော်လုပ်ချင်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ အကြံမရသေးပါဘူး၊ လုပ်ဖြစ်ရင် ကိုမျိုးချစ် လုပ်ခွင့်ပြုပေးပါလို့ request လုပ်ချင်တာပါ။
Very very nice song. I am really proud of you. I was away from the office since two months ago and I just came back from south america. I miis all of you from C-box. Say hello to them and will be back soon in C-box.
ko myo chit da kal bie song ka ya tha myaut par dal.....nuck htet lae` poe pay bar oo...dar nae` ko myo chit ka song sat tar da kal bie ya tha myaut tal....ah yan lay sar mi dal byar....nuck htet lae` poe pay bar oo byar............
ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုနှလုံးသားနဲ့ ဖွဲ့ဆိုလိုက်တဲ့သီချင်းလေးမို့အလွမ်းရသမြောက်သွားပါတယ်၊ ဒီသီချင်းလေး မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့အရပ်ဆီကနေဘ၀တွေပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့သူတွေဆီဧရာဝတီနဲ့ အတူထာဝရစီးဆင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်၊၊
Suchatouching song! Thanks for the great effort!
သီချင်းနားထောင်ပြီးရင်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရတယ်..ကိုမျိုးချစ်ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်..နောက်ဒီထက်ပိုပြီးကိုမျိုးချစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ပါစေလို့
please send for me second song also.
Thanks you so much and I'm so appreciate for your work and well done.
our myanmar will get freedom soon
အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။ စာသားရော သံစဉ်ရော ဆိုထားတဲ့ စတိုင်ရော...။
ကိုမျိုးချစ်ရေ သီချင်းစာသား ခံစားချက်ကိုထိတယ်ဗျာ၊ သံစဉ်စာသားက ရုပ်ဒြပ်ညီတယ်၊ ဆရာဦးဝင်းဖေ လက်ခံနိုင်တဲ့ သံစဉ်နဲ့ အကြောင်းအရာ သီဖွဲ့မှုမျိုးပါပဲဗျာ
This song is very touching.. Impressive of the songs as well as all the information here and all the picture created. On top of that attitude of the song is great.
I would request to get permisson to down load that song and post to my personal bolg.
i love your song very much and it is very heart breaking because of everything in the song is true. thank you for your song on behalf of my lovely burmese people specially nargis cylone victim.